I-Manor House Farm Cottage, eN York Moors, eTroutsdale
Igumbi elipholileyo leBanga lesi-II elidweliswe kwiPaki yeSizwe yeMoors yaseNorth York, eTroutsdale, kufutshane neScarborough. Ulala 4 kumagumbi okulala ama-2. Igumbi lokuhlambela eli-2, ikhitshi / isidlo sangokuhlwa, igumbi lokuhlala. I-Patio kunye negadi. Indawo yasemaphandleni: ivenkile kunye nee-pubs ezikude ngeemayile ezi-4; okuninzi ngakumbi eScarborough nasePickering.
Le ndlu yokulala enamagumbi amabini eholide idityaniswe neFama yeManor House, ipholile, itofotofo, inefenitshala entle kwaye ixhotyiswe kakuhle. Ikwindawo yasemaphandleni ezolileyo, ejongene nentlambo entle yaseTroutsdale, yona ngokwayo eyimfihlelo egcinwe kakuhle nasekuhlaleni. I-cottage ilungele ukubaleka-kuko-konke-konke kusapho oluthanda amaphandle okanye abahlobo.
IManor House Farm Cottage isembindini wendawo ethandekayo nephantsi kakhulu yasemaphandleni naselunxwemeni. Ukusuka emnyango, hamba ngeenyawo ujonge intlambo yeTroutsdale, enehlathi laseDalby ngasentshona, ilali yaseHackness ngasempuma kunye nomlambo iDerwent oqukuqelayo. Ezona ndawo zikufutshane zokutyela ngaphandle okanye ukufumana ipayinti okanye indawo yokuthatha indawo kwilali yaseSnainton kumgama oziikhilomitha ezi-3.5 (kukho iintlanzi kunye neetships kunye neepubs ezimbini), iMoorcock Inn eLangdale End iimayile ezi-6 kude (Thur-Sun kuphela) kunye ne-Everley. Ikhefi (ngemini kuphela) kufutshane neHackness, iimayile ezisi-7 kude.
EScarborough ngokwayo, iimayile ezili-12 kude, kukho ubungangamsha beVictorian, iilwandle ezimbini ezithandekayo ezinesanti, uluhlu lwezindlu ezinemibala yaselwandle eNorth Bay kwaye, ukujikeleza kuzo zonke iikona, intlanzi emnandi kunye neetships. Khangela, kwakhona, iimbatyisi ezintsha, unonkala kunye nelobster kwi-South Bay kiosks, yiva iikonsathi zasehlotyeni zedeck-chair e-Spa, uqeshe i-pedalo e-Peasholm Park, urente ibhodi yokusefa okanye ibhodi yomzimba (kunye ne-wetsuit!) eNorth Bay okanye eCayton Bay, hamba i-clifftops ukusuka kwiziphelo zombini zedolophu, dlala i-minigolf, uhlolisise inqaba, okanye ukhangele iivenkile ze-Victoria Road ze-junk ze-vintage.
Ungaphoswa kukuqhuba okanye uhambe kwiiMoors zaseMantla eYork kwaye undwendwele ezinye zeedolophu ezintle kunye neelali ezibangqongileyo, ezinje ngeThornton-Le-Dale, Hutton-Le-Hole, Goathland. E-Pickering uya kufumana iivenkile zamandulo ezinqabileyo kunye nezipho, ii-pubs kunye neekhefi, kunye ne-Pickering eyaziwayo ukuya kwi-Whitby steam train-indlela eqaqambileyo yokubona ama-moors, kunye nethuba lokuhla ezilalini endleleni.
Ukufumana igrosari esisiseko tyelela ivenkile yeSnainton kunye neposi (iikhilomitha ezi-3.5) okanye i-Spar yokuvula kade e-East Ayton (iikhilomitha ezi-8.5). Ezona venkile zikulungeleyo ukufikelela eScarborough (iikhilomitha ezili-12) yiProudfoot, iAldi, iTesco (iya kuzisa kwindlu encinci) kunye neSainbury's (iya kuzisa kwindlu encinci). Okanye undwendwele iholo yemarike yemveli yaseScarborough, embindini wedolophu, uyokuthenga iziqhamo, imifuno kunye nenyama. E-Pickering kukho iivenkile ezinkulu zaseLidl kunye ne-Co-op, kunye nebhula egqwesileyo kunye negrosari kwisitrato esikhulu.
IManor House Farm kunye neCottage zezeziHolide zeLizwe Cottage, ishishini losapho elisuka eScarborough, kuMntla Yorkshire (bona ezinye izintlu zethu - sinezindlu zangasese eScotland, North Yorkshire, Cumbria nase County Durham kakhulu).
IManor House Farm kunye neCottage zezeziHolide zeLizwe Cottage, ishishini losapho elisuka eScarborough, kuMntla Yorkshire (bona ezinye izintlu zethu - sinezindlu zangasese eScotlan…